Macalinka Kooxda Roma Paulo Fonseca Oo Diiday Inuu Is Casilo.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMacalinka kooxda Roma Paulo Fonseca oo diiday inuu is casilo.
Sida laga soo xigtay warbixinno dhowr ah oo kasoo baxay Talyaaniga, tababaraha Roma Paulo Fonseca ayaa diiday inuu is casilo, laakiin waxaa jira afar tababarayaal ku meel gaar ah ‘oo diyaar u ah’ haddii Giallorossi ay guuldaro culus kala kulanto Manchester United khamiista.
Roma ayaa ku jirta kaalinta 7aad ee Serie A, kaliya labo dhibcood ayey ka sareysaa Sassuolo, iyadoo afar kulan ay harsan tahay dhamaadka horyaalka talyaaniga Kooxda Giallorossi ayaa maamushay kaliya afar dhibcood shantii kulan ee ugu dambeysay Serie A waxaana laga badiyay lugtii hore ee semi-finalka Europa League ee ay la ciyaareen Manchester United 6-2 isbuucii hore.
Fonseca ayaa la kulmay Dan iyo Ryan Friedkin iyo maamulaha guud ee Roma Tiago Pinto shalay Shirka ayaa socday hal saac waxaana ka soo qeyb galay wakiilka tababaraha sidoo kale Kooxda ma ceyrin Fonseca, Boortaqiiska ayaa ku adkeystay inuusan dooneynin inuu is casilo, in kasta oo uu ka warqabo in waqtigiisa caasimada uu dhamaan doono dhamaadka ololaha.
kooxda ayaa ugu dambeyntii go’aansan doonta inay ceyriso Fonseca haddii Roma ay guuldarro kale oo ceeb ah kala kulanto Manchester United khamiista Wargayska fadhigiisu yahay Rome ayaa sheegaya Bruno Conti, Morgan De Sanctis, Fabrizio Piccareta iyo Alberto De Rossi inay yihiin musharixiinta la wareegi doona ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka haddii Fonseca laga ceyriyo habeenka khamiista.
Maurizio Sarri ayaa ah musharraxa ugu horreeya ee noqonaya macallinka cusub ee Roma xilli ciyaareedka soo socda Sida laga soo xigtay Il Corriere dello Sport, waxaa jiri kara kulan muhiim ah isbuucyada soo socda si heshiiska loogu soo gabagabeeyo tababaraha Tuscan.
La Gazzetta dello Sport ayaa soo werisay in Sarri uu ka mahadcelinayo kooxda Roma isla markaana uu u baahan doono kaliya seddex ama afar saxiix oo xagaaga ah Si kastaba ha noqotee, tababarihii hore ee kooxda Juventus iyo Chelsea ayaa sidoo kale wadahadalo kula jira Tottenham.